युट्युवबाट यसरी पैसा कमाउन सकिन्छ
युट्युवमा भिडियो हालेर पैसा कमाउने हो सुरुमा तपाईको च्यानेल मोनेटाइज भएको हुनु पर्छ । च्यानल मोनेटाइज हुनका लागि केही मापदण्डहरु रहेका छन् । च्यानेल मोनेटाइज हुन सबैभन्दा पहिला तपाईको च्यानेलमा १ हजार सब्सक्राइबर पुगेको हुनु पर्छ । त्यसपछि तपाईको च्यानलमा ४ हजार घण्टा वाच टाइम पनि पुगेको हुनु पर्छ । यति भएपछि तपाईले आफ्नो च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नु हुनेछ । च्यानेल मोनिटाइज भएपछि मात्रै तपाईले हालेको भिडियोले पैसा कमाउन सक्छ ।
भिडियो हालेपछि कसरी पैसा आउँछ ?
भिडियोले कति पैसा कमाउँछ ?
कस्ता भिडियो पैसा कमाउन योग्य हुन्छन् ?